Muse Bixi haddii aan maamulkiisa saluugay ama ujeedkayagu yahay toosin maaha in doqontu ka faa’iidaysato. | Awdalpress.com
Muse Bixi haddii aan maamulkiisa saluugay ama ujeedkayagu yahay toosin maaha in doqontu ka faa’iidaysato.
Waxa Daabacay staff-reporter on Feb 8th, 2018 and filed under Daily Somali News. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.
Awdalpress – London – Muse Bixi waa ninka maanta ku fadhiya kursiga ugu sarreeya ee Somaliland. Taasi micnaheedu waxa ay sheegeysaa in uu yahay ninka xilligan ah madaxweynaha Somaliland. Amma jeegaan aan ku sheegno amma aan si kaleba u diidnee.
Laakiin waxa uu u baahan yahay mucaarid adag iyo saxaafad sida togan wax u saxda, isla markaana tilmaanta oo ku canaanata qaladka uu galay amma uu geli karo amma la gelin karo. Waayo mas’uuliyadda uu hayaa maaha mid uu iska leeyahay, ee waa mid waajibkeedu inna wada saaran tahay.
Waa marka koowaade, markii uu Muse soo dhisay dawladdiisa aan ka wada dhagarsannahay, ayaan billaabay in aan mucaarido. Waayo, waxa isku kay qaban waayey ballan qaadkiisii ahaa in uu dawlad tayo leh soo dhiso doono iyo xukuumadda uu ka soo xushay badi intii ugu liidatay xisbigiisa aqoon ahaan iyo maamul ahaanba amma qaabka saami qaybsiga beelaha dhulka Somaliland aadka u dega.
Wakhtigii uu ololaha ku jiray marna maan qalin daarin ama kamaan hor iman Muse Bixi, waayo waxan u arkayey nin kar kar ah oo la tartamaya rag kale. In aanan u kala eexan ragga tartamaya ayaanan go’aansaday. Dhex dhexaad ayaanan inta badan ka ahaa.
Maanta Muse waa Madaxweyne, marxaladduna waxa ay maraysaa meel adag, oo uu Musena dareemay xummadda amma qallooca xukuumaddiisa lagu saluugay, mase doonayo in uu mar labaa qaldamo, oo uu inta dawladdiisa u hadhay, uu haddana soo xusho dad ka sii liita kuwa maanta uu magacaabay.
Tusaale ahaan waxa jira shakhsiyaad aan aqaan, oo si fool xun ugu soo ololeeyey Waddani, immigana weli ku jira ololihii iyo qaab kale oo ay Muse Bixi wax kaga doonayaan. Shakhsiyaadkaasi waxa ay ka yimaaddeen qurbaha, shacabka reer Somalilandna waxa ay u keeneen siyaasado lagu kala qaybinayo iyo qabyaalad aad u far xun.
Aniga oo arrintaa liishaamaya, ayaan ka digayaa in Muse Bixi iyo dawladdiisu gacan siiyaan dadkaasi ku soo gabbanaya hadhka awdalpress.com, oo aan weliba sumcad ku lahayn shacabka. Haddii ay moodayaan inay qalinkayaga ku faa’iidayaan, amma si aan toosinta amma dhalliisha u joojinno ay been ugu sheegaan mas’uuliyiinta qaar amma madaxweynahaba, iyaga oo iska dhigaya in ay mas’uul ka yihiin awdalpress.co,. Waxaba dhici doonta in xaalku ka sii xumaado.
Calaa kulli xaal si faah faahsan oo odaynimo ayaan xukuumadda iyo shacabkanba talooyin ugu soo jeedin doonnaa, arrimo badan oo aan kula talin doono, maamulka Muse Bixi iyo sidii loo sixi lahaa waxa qaldan amma qaldamay, ayaanad naga filan doontaan.
Tifaf tiraha awdalpress
This post has been viewed 9040 times.